Vy mandoro vy: Inona io, ny fomba fampiasana azy, ary ny mifidy | Fitaovana maimaim-poana
Vy mandolo volo: inona izany, ahoana ny fampiasana azy, ary iza no tokony hofidina
Isaac | 20/09/2021 09:00 | Fitaovana elektronika
Un vy fanimbana vy na paompy firaka Fitaovana be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika izy io, satria mamela ny fanesorana solder timah. Izany hoe, io no ho mpanohitra an vy soldering. Ary, na dia fanesorana lasitra iray aza dia azo atao amin'ny fomba tsy dia mahazatra loatra, miaraka amin'ity gadget ity no hanaovanao azy tsara sy haingana kokoa.
Afaka mianatra bebe kokoa momba izany ianao fitaovana elektronika, amin'ity lahatsoratra ity dia hahita fampahalalana mazava kokoa ianao hisafidianana izay mety indrindra amin'ny asanao.
1 Inona no atao hoe vy manimba volo?
1.1 Fomba fampiasana vy manimba
2 Torohevitra fanolorana tin
Inona no atao hoe vy manimba volo?
Un vy mandolo Izy io dia fitaovana fanampiana mandritra ny fizotran'ny welding. Raha nisy ampahany nohosina tsara napetraka, na tsy tsara kalitao ny lasitra ary tapaka fa hanomboka hatrany am-boalohany mba hahamety azy, dia hanampy anao hanala mora las iray ity fitaovana ity.
Ny vy mpangalatra dia mitovy be amin'ny pensilihazo na vy soldering mahazatra. Ary noho ny tendron'ny tendrony dia hamela anao hanafoana ireo teboka welding na dia amin'ny toerana kely aza.
Fomba fampiasana vy manimba
Mampiasa vy fanimbana firaka Tsotra be izy io, mila manaraka andiana dingana lehibe fotsiny ianao mba hahafahanao manala solder. Amin'ny ankapobeny dia ahitana:
Ampifandraiso ny vy mandrehitra ary andraso izy hahatratra ny maripana avo indrindra, toy ny hataonao amin'ny soldering nentim-paharazana.
Ny zavatra manaraka dia ny fametahana ny tendrony mafana mifandraika amin'ilay solder mba hofongorana ary miandry ny hiempo azy.
Raha vantany vao vita izany dia azonao atao ny manala ny vy amin'ny vy efa rava. Amin'ny alàlan'ny paompy mitsoka, dia hanampy anao hitsoka ireo vovo-vy navela hamela ny singa hadio.
Raha vantany vao vita dia azonao atao ny manafoana ireo fitaovana notrohana rehefa nanamafy indray izy ...
Torohevitra fanolorana tin
Raha mieritreritra ny hividy vy mandolo volo ianao dia afaka misafidy iray amin'ireny modely natolotra:
Tin vy manjavona Mpanjaka miaraka amin'ny paompy mitsoka sy harato manimba.
Kitapo 24 ho an'ny solder: miaraka amin'ny vy misy vy, vy manimba, multimeter, tweezers, scalpel, tendron'ny visy, sns.
Wick mihosin-draha misy sakany 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.5mm, 1,5m ny halavany.
Amboary ny vy efa rava miaraka amin'ny suction mora vidy ho an'ny vao manomboka.
SIQUK 7 singa: vy manimba volo vita amin'ny tin ary kalitaona 6 horonana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fitaovana elektronika » Vy mandolo volo: inona izany, ahoana ny fampiasana azy, ary iza no tokony hofidina
Manamarina transistor: nohazavaina tsikelikely
Faraday tsy tapaka: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny vidin'ny herinaratra